Ma loo baahan yahay in la isticmaalo VPN? Faa'iidooyinka iyo qasaaraha | War gadget
Fadeexadihii ugu dambeeyay ee la xiriira asturnaanta Facebook, iyo waliba Google in kasta oo ay aad u yar tahay, haddana waxay mar kale na tusaysaa taas asturnaanta waa inay ahaato mudnaanta dhammaan isticmaaleyaasha inay ka hor istaagaan shirkadaha waaweyn inay u ganacsadaan xogteena sidii iyagoo ku jira dukaan dhaqameed.
Mar kasta oo aan maqalno fadeexad cusub oo asturnaan, shirkadda ay dhibaatadu saameysey waxay heshaa habab kale oo ay ku awoodaan sii wad helida xogta isticmaalaha, ilaa mar kale la ogaado oo loo maro habka xiga. Habka ugu wanaagsan uguna wanaagsan ee aan xogtayada uga ilaalin karno dhinacyada saddexaad waa adoo adeegsanaya VPN.
Markaan idhaahdana waa sida kaliya ee aan isku difaaci karno, taasi waa, nasiib daro, waa sidaas. In kasta oo aanaan lahayn xisaab Facebook ah, mar kasta oo aan ku booqanno bog ka mid ah shabakaddan bulsheed, aaladdayada trackers ayaa lagu rakibay kuwaas oo mas'uul ka ah duubista dhammaan howlahayaga biraawsarka aan adeegsanno.
Markaad isticmaaleyso mashiinka raadinta, xalka ugu badan ee la isticmaalo waa midka ay bixiso Google, in kastoo aan sidoo kale adeegsan karno biraawsarka Microsoft ee loo yaqaan Bing. Labadaba waxay ku duubaan waxqabadkeena internetka, si loo ururiyo xogteenna oo markaa aan u hagno adeegyada xayeysiinta ee ay bixiyaan.
1 Waa maxay VPN?
2 Sidee VPN u shaqeeyaa?
3 Maxaa loogu talagalay VPN?
3.1 Si nabadgelyo leh ugu xir server-ka shirkadeena
3.2 Ka gudub xadka juqraafi
4 Qodobbada xun ee VPNs
4.1 Yaraynta xawaaraha
5 Maxaan ku xisaabtameynaa markaan shaqaalaysiineyno VPN?
5.1 Aaladaha iswaafajiya
5.2 Liisaska cad
5.3 Tirada aaladda
Gaabinta VPN, waxay ka timid English Virtual Private Network, oo lagu turjumay Isbaanishka waa Virtual Private Network, oo ah shabakad laga aasaasay internetka (halkan dalwaddii) si loogu xiro server ama server gaar ah. Xidhiidhkaasi gabi ahaanba waa aamin yahay oo cid kale ma heli karto xiriir, maaddaama ay ku duuban tahay bilow ilaa dhammaad.
Adeeggan isgaarsiinta ee dhammaadka-dhamaadka ah, ma aha oo keliya qalabka desktop-ka. Waxaan sidoo kale haynaa adeegyada VPN ee aaladaha mobilada sida Android iyo IOS, aaladaha mobilada oo noqday aalad sii kordheysa oo la adeegsanayo maadaama ay noo ogolaaneyso inaan ka shaqeyno meel kasta. Waxaad haysaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan sida loogu isticmaalo aaladahaan Halkan.
Oo hadda markaan ognahay waxa VPN yahay, aan isku dayno inaan sharaxno sida ay u shaqeyso. Si aad uga hesho macluumaad kasta internetka, aaladdayada waxay ku xiran tahay bixiyahayaga internetka, midka aan qandaraaska ku qaadannay gurigeenna ama shirkadda taleefanka. Bixiyaha xiriirkeena wuxuu na siinayaa waxyaabaha aan codsanay iyo kaydiyaa diiwaanka u dhigma.
Haddii aan isticmaalno VPN, markaan sameyno baaritaanka internetka, dhammaan codsiyada aan sameyno waxaa toos loogu diraa VPN in aan qandaraas ku qaadnay anaga oo aan marin shabakadeena internetka waqti kasta, sidan oo kale, waxaan iska ilaalinaa in aan ka tagno raadadka howlaheena internetka.
Waxaan ka fogaaneynaa inaan uga tagno raadkeena waxqabadkeena internetka, maxaa yeelay adeegyada VPN ha dhigin wax diiwaan ah oo ku saabsan waxqabadkayaga internetka, ilaa iyo inta ay yihiin adeegyo lacag la siiyay. VPN-yada bilaashka ah waxay na siinayaan qaar ka mid ah aqoonsi la'aanta aan raadineyno, laakiin kharashka allabaryo kala duwan sida xawaaraha isku xirnaanta iyo in xogtayada daalacashada ay markii dambe ka iibiyeen shirkado kale.
Maxaa loogu talagalay VPN?
Marka lagu daro noo oggolaanshaha in aan si qarsoodi ah u baaraanno, VPN-yada waxay leeyihiin koronto kale oo iyaga ka dhigta ay u adeegsadeen shirkadaha iyo shaqsiyaadkaba sababo kala duwan awgood:
Si nabadgelyo leh ugu xir server-ka shirkadeena
Kuwo badan ayaa ah shirkadaha adeegsada server-yada ay iyagu ku kaydsadaan dhammaan macluumaadka maamulka shirkadda. Macluumaadkan looma bandhigi karo adeegsade kasta oo leh aqoon ku filan heli karaan iyaga oo u xado si ay ugu iibiyaan suuqa madow (halkaasoo xogta ugu badan ee shirkadaha waaweyn laga xado).
Shaqaalaha shirkadahaan oo fursad u leh inay guryahooda ka shaqeeyaan waxaa lagu qasbay inay adeegsadaan VPNs, sameynta xiriir sugan oo u dhexeeya macmiilka (shaqaalaha) iyo server-yada (shirkadda). Xiriirintani waa mid qarsoodi ah dhammaad ilaa dhammaad waana wax aan macquul aheyn (waligaa ha dhihin waligaa) in la furo si loo helo taraafikada labada dhinacba u socota.
Ka gudub xadka juqraafi
Ka baxsan jawiga ganacsiga, VPN-yada waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa in laga gudbo xuduudaha juqraafiyeed. Mid ka mid ah isticmaalka ugu caansan waa awoodda helitaanka waxyaabaha laga heli karo wadamada kale adeegyada kaladuwan ee fiidiyowga qulqulka ah ee aan ka heli karno suuqa, adeegyada leh buug-yare kala duwan oo waddan kasta leh.
Sidoo kale waa ikhtiyaarka kaliya ee lagu galo bogagga shabakadda ee xanniban Wadamada qaar, boggaga kaliya ee laga heli karo IP-ka ka diiwaan gashan wadan kale, iyada oo ah ikhtiyaarka kaliya ee lagu awoodo in lagu dhaafo xuduudaha ay dejiyeen dowladaha qaar, wadamada sida Shiinaha iyo Ruushka ayaa mamnuucay adeegsiga noocan ah codsiyada. .
Faa'iidada kale ee ay VPNs na siiso waa suurtagalnimada in laga gudbo xayiraadaha bixiyeheenna markay tahay kala soo bax internetka, Isticmaalka hab maamuuska P2P. Wadamada qaarkood waxay dejinayaan xadidaadyo muhiim ah markay isku dayayaan inay ka fogaadaan burcad-badeednimada iyagoo adeegsanaya internetka, iyagoo xayiraya adeegsiga hab maamuuska noocan ah.
Qodobbada xun ee VPNs
Sida iska cad, wax walba qurux ma noqon karaan haddii aan isticmaalno VPNs. Kuwani waxay la xiriiraan taxane ah cilladaha aan hoos ku faahfaahinayno:
Cilladaha kaliya ee aan helno markaan adeegsaneyno adeegyada VPN waa taa isku xawaare kuma shaqeeyaan marka loo eego bixiyahayaga internetka, markaa waxay kuxirantahay adeegga aan isticmaalno, adeegsiga shabakaddu waxay u egtahay inuu ka yaraan doono ama ka yaraan doono. Qodobkaan, oo ay weheliso haddii adeeggu lacag la’aan yahay iyo in kale, waa mid ka mid ah arrimaha ay tahay inaan tixgelinno marka aan shaqaalaysiineyno VPN.
Maxaan ku xisaabtameynaa markaan shaqaalaysiineyno VPN?
Haddii aan dooneyno inaan ilaalino xiriirkeena internetka waqti kasta, ama gurigeena ama taleefankeena casriga ah, waa inaan maskaxda ku haynaa in adeegga noqo mid la jaan qaadi kara labada qalab ee mobilada iyo kombiyuutarada miiska (Windows, macOS iyo Linux) iyo aaladaha kale ee fiidiyoowga ah ee fiidiyoowga ah (Apple TV, Chromecast, Fire TV ...).
Codsiyada qaarkood iyo bogagga internetka ee bangiyada, ha taageerin adeegyada VPNSidaa darteed, adeegga aan qandaraaska siineyno waa inuu noo oggolaado ku darista waxyaabo ka reeban, ka reebitaanno noo oggolaanaya inaan ku darno codsiyo ama degello aan adeegsan doonin VPN iyada oo aan lagu qasbin inaan si kumeelgaar ah u goyno adeegga, iyadoo halista ah inaan hadhow ilawno inaan laabanno si aan u hawlgelinno.
Guri kasta, waxaa ku yaal aalado aad u tiro badan haddii ay yihiin taleefannada casriga ah, kiniinnada, kumbuyuutarrada, sanduuqyada sare-sare ... aaladaha kuxiran xadka ay dejisay adeegga, waxay noqon kartaa dhibaato iyo inaadan bixin ilaalin aan raadin karno qoyskeena oo dhan.
Laga soo bilaabo Actualidad Gadget waxaan kugula talinaynaa inaad akhrido kuwan Fikradaha ProtonVPN, mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee lagu qiimeeyo amaankiisa iyo qiimaha lacagta.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Aplicaciones » Ma loo baahan yahay in la isticmaalo VPN?
Barnaamijyada ugufiican ee wicitaanada fiidiyaha kooxda